Tontolo Iainana: Mpitoraka Bilaogy Momba Ny Angovo, Sy Ny ‘Zero Africa Rally’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2018 15:26 GMT
Mpitoraka bilaogy maro no niresaka tamim-pahamalinana ny momba ireo olan'ny angovo, avy amin'ny angovo nokleary, ny ‘herinaratra apetaka dia miasa avy hatrany ‘ ny “Clean Ambitions”- Faniriana Madion'ny shinoa ary ireo Foiben'ny Angon-drakitra Maitso. Na any Afrika Atsimo izany, na any Shina na any Amerika, nahatonga ireo mpitoraka bilaogy hieritreritra vahaolana ny olana momba ny angovo.
Mametraka fanontaniana i Ian Gilfillan “Nahoana no mbola misy ihany ny misaina ny nokleary ?”. Mirona mankany amin'ny antony mahatonga ny angovo nokleary mbola mahazo tohana izy, indrindra rehefa oharina amin'ny arintany.
Raha voafetra amin'ny fampitahana angovo nokleary sy ny arintany ny adihevitra, dia toa bitika izany olana izany. Ny fiakaran'ny hafanan'ny tany sy ireo sanda goavana ara-tontolo iainana ateraky ny fitrandrahana herinaratra azo avy amin'ny arintany no mahatonga ny nokleary ho valiny mazava.
Saingy ny fametrahana ny olana amin'ny fomba voafetra tahaka izany dia tsy firaharahiana ny vahaolana tena izy – ny angovo azo havaozina.
Resahany ny tombontsoa azo avy amin'ny angovo azo havaozina, ny fitapitaka amin'ny famokarana angovo nokleary, manome ohatra amin'ny tetikasa momba ny angovo azo havaozina sady milaza mazava tsara fa ….
Tsy azo havaozina ny nokleary !
9 taona eo ho eo sisa ny tahirinà oraniôma raha hivadika hampiasa nokleary izao tontolo izao. Mety hidangana ny vidin'ny oraniôma, ary dia hisy ny fifaninanana amin'ny fampandehanana ny teknolojia vaovao mba hahazoana azy misimisy kokoa, toy ilay sosokevitry ny indostria nokleary iray amin'ny fikarakaràna ny akora fandrehitra mamoaka taratra efa avy nampiasaina. Ankehitriny dia tena lafo be sy mampidi-doza izany.
Mijery ny angovo nokleary sy ny angovo azo havaozina eo amin'ny sehatry ny tolotra sy ny tinady ao Shina, Afrika Atsimo ary India ihany koa i Rory-n'ny Carbonsmart, ao amin'ny ampahany manazava ny antony mahatonga ny fisian'ny fakampanahy hitodika amin'ny nokleary. Dinihany ireo fanamby amin'ny fialàna amin'ireo loharanon'ny solika nentim-paharazana hankany amin'ny loharanon'angovo azo havaozina. Amin'ny fanatanterahana izany dia arosony ny hevitra momba ny ‘herinaratra apetaka dia miasa avy hatrany’ amin'ny famaritana izany hoe
Miatrika tsy fahampianà tahiry ihany koa ny angovo azo havaozina ary noho ny antony mitovy amin'izany : dia tsy isan'ny orinasa mahazatra mikirakira angovo amin'ny sehatra goavana izy, ary malaky miroborobo be ny teknolojia. Ireo orinasa madinika mikirakira ny angovo azo havaozina dia tsy maintsy misedra zavatra maro, nefa lehibe kokoa ny tombontsoa mety ho azo. Amin'ny lafiny iray, dia manome fahafahana bebe kokoa ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana handray anjara amin'ny fampiroboroboana sy ny fandaminana ny rafitra (vakio : asa) ary ho an'ny hafa ny famokarana herinaratra zaraina, ary amin'ny lafiny iray tsy ilaina ny fampanarahana fenitra ny teknolojia iray voafaritra. Raiso izay mety indrindra ho anà toejavatra iray voafaritra, fa mety ho zavatra hafa tanteraka ny tetikasa manaraka.
Nodinihina tao amin'ny sombin-dahatsoratr'i Rachel Wasser ny ‘Clean Ambitions’-n'i Shina ao amin'ny bilaogy China Dialogue.
Mbola vokarina amin'ny angovo amin'ny arintany tsy mahomby ny sivifolo isanjaton'ny herinaratra any Shina, nefa manana tanjona matotra hampivelatra ny sehatry ny angovo azo havaozina ny firenena. Tena afaka ataon'i Shina tokoa ve ny hanana angovo maharitra ?
Any Amerika, tsirin-kevitra avy amin'i Jeremy Faludi ao amin'ny vondrona bilaogy worldchanging dia mikaroka eo amin'ny sehatry ny informatika, indrindra ho amin'ny fisiana Foibenà Angon-drakitra manaja ny tontolo iainana. Ny Foiben'ny Angon-drakitra dia toby fitahirizana ho an'ireo lohamilina ampiasain'ireo kaompania maro toy ny Google, ny Amazon ary eny fa hatramin'ny kaompania mpampiantrano bilaogy mba hitantanana tolotra ataony ety anaty aterineto. Mitaky vaikana herinaratra ambony ireo foiben'angon-drakitra ireo, ary ao amin'ilay sombin-dahatsoratra dia jeren'i Jeremy izay fomba hahombiazan'ireo foiben'angon-drakitra ireo kokoa, amin'ny fanomezana ny fanavaozana momba ny fikarohana momba ny fiarovana ny tontolon'ny informatika, ny teknika ary ny tatitra.
Farany fa tsy ny kely indrindra, ambaran'i Carl avy amin'ny Greencars ny Zero Africa Rally,
Ny Zero Africa rally “dia ho fanambim-paharetana, fanehoana ny mety hahvelona sy ny mety ho azo ampiasàna ireo fiara manaja ny planeta. Misokatra ho an'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, amin'ny herin'ny masoandro, ny safiotra, ny hidrozena ary ny solika bio.”
Tokony hatao amin'ny volana Janoary 2009 ny hazakazzaka, ary any ho any amin'ny 4000 km avy eo Cape Town mankany amin'ny riandranon'i Victoria. Hampahafantarinay hatrany ianareo.